Jery Todika 2015 | NewsMada
Jery Todika 2015
Par Taratra sur 04/01/2016
Mitohy hatrany ny “jery todika” eto amin’ny pejin’ny fanatanjahantena eto amin’ny gazety Taratra. Hoentina anao anio ny mahakasika ny taranja kick-boxing sy ny basikety sy ny zava-bitany nandritra iny taom-pilalaovana 2015 iny. Ho an’ny kick-boxing manokana, nahazoan’i Madagasikara vokatra tsara ity taranja ity eo amin’ny sehatra maneran-tany raha teo anivon’ny oseana Indianina kosa ny basikety.
Kick-boxing : nampisandratra an’i Madagasikara tany ivelany
Tsara ny vokatra. Izay no azo amehezana ny zava-bitan’ny taranja kick-boxing malagasy teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Ankoatra ny vokatra azontsika tamin’ny alalan’Andriamiarisoa Miora Tiana (-48 kg), teo amin’ny vehivavy, sy Rakotondrabe Laurent Jhonny (-54 kg), teo amin’ny lehilahy, ka nahazoantsika medaly volafotsy sy alimo, tamin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany tany Belgrade, Sérbie, mbola voahosotra ho tompondaka eran-tany teo amin’ny kick-boxing pro i Madagasikara tamin’ny alalan’i Mamonjisoa Sévérin (-63,5 kg). Marihina anefa fa sambany isika nandray anjara tamin’izany fiadiana ny tompondaka eran-tany eo amin’ny kick-boxing pro izany. Avy hatrany anefa, nigoka sy nianoka tanteraka tao anatin’ny fandresena miezinezina isika.
Tsy vitan’izany ihany fa mbola tsy nampitsanga-menatra an’i Madagasikara teo anivon’i Afrika sy ny ranomasimbe Indianina ihany koa ny taranja kick-boxing. Niraradraka ho an’ny Malagasy ny medaly tamin’iny taom-pilalaovana 2015 iny.
Noho izany, taratra ny tanjona ary tanteraka ny fanamby napetraky ny federasiona malagasy (FMKB/DA) tarihin’ny filohany, Andrianirina Briand. Ho an’ity taom-pilalaovana 2016 ity indray kosa, efa miomana ny hampiantrano ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika ny FMKB/DA.
Basikety : nitondra an’i Dago teo anivon’i Afrika sy ny O.I.
Nahoraka taty Afrika sy taty amin’ny ranomasimbe Indianina (OI) ny lazan’i Madagasikara teo amin’ny tontolon’ny basikety. Tanteraka mantsy ny fanambin’ny federasiona malagasy (FMBB) tarihin’ny filohany, Ramaroson Jean-Michel, sy ny ekipany. Vitan’izy ireo ny nampiantrano hetsika iraisam-pirenena roa sosona tamin’iny taom-pilalaovana 2015 iny. Ny voalohany sady goavana tamin’izany ny “Afrobasket Women U16”, izay nahazoantsika ny laharana fahadimy aty Afrika. Na tsy tsara loatra aza ny vokatra, nahazo filaharana afrikanina eo amin’ny tontolon’ny basikety sokajy zandriny zazavavy isika.
Nifanohitra tamin’izay kosa ary nahazoantsika voalohany kosa ny fiadiana ny “Coupe des clubs champions de l’océan Indien” na CCCOI. Nanaovan’ny Sebam, ekipan’i Boeny, pao-droa mihitsy mantsy ny hetsika, ny volana oktobra lasa teo. Sady norombahiny ny teo amin’ny vavy no nalainy koa ny teo amin’ny lahy. Mbola mipetraka hatrany ny lazan’i Madagasikara eo anivon’ny oseana Indianina.
Ankoatra izay, nahavita nanafika tatsy Angola ihany koa isika tamin’ny alalan’ny Ascut, ekipan’Atsinanana, tamin’ny fiatrehana ny fiadiana ny “Coupe d’Afrique des clubs champions” na CACC.
Etsy andaniny, tontosan’ny federasiona avokoa ireo fifaninanam-pirenena nanomboka teo amin’ny sokajy U14 zazavavy sy zazalahy hatrany amin’ny N1B sy N1A ary ny “veterans”.
Nanatontosa: Miary Narindra